Welcome to Aayaha Nolosha » CADCEED “BILOWGII IS-BARASHADEENII HORE JACAYLKA INAGUMA JIRIN XIRRIIR GUUR LAAKIIN…”.
January 15, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Sannad kadib maalintii farxadda lahayd ee ku suntanayd 14-01-2018. Page-ka somali faces oo aan siinay warbixin buuxda ayaa u soo qoray si iyaga u fudud madaama ay english ku qoraan, haddaba halkan akhriso Qisadii oo dhan.
Wey adagtahay in erayo kooban lagu xardho bilowgii xidhiidhkeena ilaa guurkeenii. Runtii waxaan maanka ku hayaa in aan ka qoro buug aan ugu magacdaray: “Jeceylkii Kaftanka ku bilowmay”
Qormadan waxaa si wada jir ah idiinla wadaagaya Nasir Cadceed iyo Xamda Xaji.
Sawirka wuxuu ka turjumayaa Ninkasta oo faraxsan waxaa ka dambeysa marwo Sharaf leh. Xamda farxad iyo wanaag baan ka helay.
Xamda xaaji Axmed waxay ka mid tahay hablaha Soomaaliyeed kuwooda ugu Firfircoon ugu quruxda badan, waxay ahayd inan uu Ninkastaa jeclaan lahaa inay noqoto xaaskiisa, balse aniga ayuu ilaahay isiiyay oo ka yeelay xaaskayga.
Haddii nala waydiiyo sidee isku barateen waxaa dhici karta in aan ka jawaabi karin, waxaa laga yabaa inaad nala yaabtid.
Xamda waa inan caan ah oo sumcad iyo Sharaf ku dhex leh bulshada, aniga korka ayaan ka aqaanay waayo waa Wariye caan ah oo barahaha bulshada iyo deegaa daad looga yaqaana.
2014 ayaan ku soo biiray baraha bulshada oo aan furay page-kayga Nasir Cadceed aan uga hadlo arrimo kala duwan, sida diinta, Dhaqanka, Arrimaha bulshada, Arrimaha qoyska iyo siyaasadda. Muddo yar kadib waxaan yeeshay Asxaab badan oo i taageerta, oo waxaan noqday caan sida Xamda oo kale . Taasi waxay ii sahashay in aan barto dad badan oo Wax ku Ool ah.
Ilaahay wuxuu qadaray in aan Xamda si toos ah isu barano madaama aan isku xirfad noqonay(halkaan rabay Roob ma iigu helay).
Xamda waanu is baranay, bilowgii hore naguma jirin xidhiidh guur ah, lakiin kaftan iyo sheeko dheer kadib, waxaan is arkay anoo la i sito oo qalbigii Xamda sii raacaya .
Sidoo kale xamdana waa la soo galay, waxaana na dhexmaray is fahan weyn, oo ku dheehan naxariis iyo niyad sami.
Intaas wixii ka dambeeyay waxaan u xidhiidhi jirnay si joogta ah muda dheer ayaanu kawada hadli jirnay aaladaha Casriga ee adeega bulshada, kadib waxaa na dhex maray jacayl dheer waxaan isla qaadanay inay lagama maar maantahay in aan is aragno madaama aanu kala fognahay oo aan kula noolayn qurbaha iyo dalkii hooyo.
13kii bishii october 2017 ayuu Nasir iigu yimi Magaalada Hargaysa waxay ii ahayd farxad kale madaama aan kulanay ninkii aan is jeclaanay ee aan xiisaha isu qabnay.
kulankaas kadibna waxaanu qorshaynay waqtiga guurkayaga waxaanu isla qaadanay inaan guurkayaga ka dhigano 30 june 2018, balse jacayl iyo xiisaha oo markasta sii badanayay waxaanu badalnay waqtiga anaga oo u soo rarnay 14 ka jan 2018.
Xaqiiq Xamda waxay leedahay astaan kasta oo gabadh lagu xusho, ilaahay wuxuu qadaray 14-1-2018 in aan is guursano, guurkii qarniga ayuu ahaa Soomaali oo dhan waa ka dhereg santahay.
6 April Ayaan imid dalka oo aan aqal galnay aniga iyo Xamda, Jeceylkii hawada ahaa ayaa noqday mid dhab ah oo aad u macaan, ilaahay baa mahad iska leh.
Xamda waa xaas fiican oo i jecel anigana aan jeclahay, waxaana jecelnahay in aan tusaale u noqono jeceylka iyo wanaaga lamaanaha Soomaaliyeed.
Waa sida uu sheegay Nasir, runtii waxaan odhan karaa waxaan ahay Qof nasiib leh oo ilaahay ku hagaajiyay nin diin iyo dabaceed leh.
Nasir waxaan u hayaa jeceyl iyo wanaag aan la soo koobi karin ilaahay ha noo siyaadiyo.
Mar waa saygaygii, mar waa saxiibkay, mar waa sheekhaygii waxaan odhan karaa wuxuu ii yahay waxwalba .
Marwalba ilaahay baan ka baryi jiray nin fiican oo diin iyo akhlaaq leh Alxamdullaahi wataa ilaahay iga aqbalay waa Ina Cadceed iiga yeelay nin i farxad galiya.
Waxa aan ka helay naxariis jacayl iyo kalsooni runtii waa dhiiri galiyahayga waana qofka aan kala tashado wax kasta oo igu soo biira sidoo kale waa saaxiibka kaliya ee aan leeyahay ee aan ula sheekaysto sida naftayda.
Ugu dambayn waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan walaalaha niyadda wanaagsan ee na taageeray maalintii farxadeenii.
Dadkayga waxaan u sheegaya inaysan u guursan iska guurso lakiin ay marka hore ilaahay weydiistaan lamaane fiican, marka xigana xushayaan Qofka ay is leeyihiin waad wada noolaan kartaan.
Jeceylka ha waaro ha ifo.
W/Q: Naasir Cadceed